LG 75” UN80 Series UHD 4K Smart TV 75UN8000PTB (Black) ~ ICT.com.mm
HomeLG 75” UN80 Series UHD 4K Smart TV 75UN8000PTB (Black)
LG 75” UN80 Series UHD 4K Smart TV 75UN8000PTB (Black)
Screen Size: 75” Display Type: 4K UHD Processor: Quad Core Processor 4K Resolution: Ultra HD 3840 x 2160 TruMotion/Refresh Rate: 50Hz HDR: HDR 10 Pro Operating System(OS): webOS Smart TV HMDI: 2... [Learn more]
Brand: LGSKU: 173792N/ASee more: LG, Lifestyle, New Arrivals, Products, Shop, TV & EntertainmentFilter by: Televisions
TruMotion/Refresh Rate: 50Hz
Operating System(OS): webOS Smart TV
HMDI:2Side
RF In: 1 RF
Wifi: Yes, Bluetooth: Yes
Dimension (W X H X D): 1693 X 1037 X 333 mm
Model Number: 75UN8000PTB
LG အမှတ်တံဆိပ် UN80 Series UHD 4K စမတ်တီဗွီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၇၅) လက်မ အရွယ်အစားရှိပြီး Resolution အားဖြင့် 3840 x 2160p resolution ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Refresh Rate – 50 Hz ရှိတဲ့အတွက် အရမ်းမြန်တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို အဆင်ပြေပြေပြသပေးနိုင်ပြီး ဂိမ်းကစားဖို့အတွက်လည်း အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ HDR 10 Pro ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Real 4K နည်းပညာကိုလည်း တွဲဖက်အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် အပြင်မှာ ပကတိမြင်တွေ့နေရသလို သဘာဝကျတဲ့အရောင်အသွေးကို မြင်တွေ့ခံစားနိုင်မှာပါ။ ပြင်ပရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ပြသတဲ့ Color Setting အတိုင်း ကြည့်ရှုနိုင်စေမဲ့ FILMMAKER MODE™ လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာ အပြင်မှာတကယ်ရင်ဆိုင်ကစားနေရသလို အမိုက်စား Gaming Experience ရရှိစေဖို့ HGIG Mode နဲ့ ALLM (Auto Low Latency Mode) တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Operating System(OS) အဖြစ် webOS Smart TV နဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး Quad Core 4K Processor နဲ့ မောင်းနှင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းစက်နဲ့ Set-top Box တွေ ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် HDMI ပေါက် နှစ်ခုပါဝင်ပြီး အခြားချိတ်ဆက်မှုတွေအတွက် USB ပေါက် တစ်ခု၊ RF In ပေါက် တစ်ခုတို့ပါဝင်ပါတယ်။ Upscaler အတွက်ကိုတော့ 4K Upscaler ကိုပဲ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ စမတ်တီဗွီဖြစ်တဲ့အတွက် ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး Netflix, Apple TV, Disney+ စတဲ့ တီဗွီစီးရီး Apps တွေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေလို အားကစားပွဲတွေ ကြည့်ရှုချိန်မှာ ပတ်လည်အသံထွက်စနစ်ဖြစ်တဲ့ Surround Sound စပီကာတွေကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ မိမိကြည့်ရှုလိုသမျှ ဘောလုံးပွဲနဲ့ အခြားအားကစားပွဲတွေကို မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့ စိတ်ကြိုက်ပွဲစဉ်တွေကို အသိပေးမဲ့ Sports Alert လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့တီဗွီကို အသံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် နာမည်ကျော် Digital Assistant တွေဖြစ်တဲ့ Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Airplay 2, Apple HomeKit, Home Dashboard တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်စေမဲ့ ThinQ AI ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Quad Core Processor 4K,Enhance everything you watch
Intelligent LG ThinQ AI makes life all the more convenient. Natural voice recognition allows you to command and control your Home IoT ecosystem .
Sports Alert, Never missashot
Ultra Surround,Dive into the art of sound
Multiple virtual audio channels createamore immersive sound experience. Enjoy subtle dialogue and sophisticated sound as if you were in the scene itself
Thrilling Sports Experience,Feel the stadium atmosphere
Realistic Gaming Experience, Win the game with LG UHD TV
HGiG Mode, Immerse yourself in the game
FILMMAKER MODE, Watch it the way it’s shown in cinemas
FILMMAKER MODE adjusts the picture, turning off motion smoothing foraCinematic experience. Watch films with the creative intent and cinematic experience preserved
Total price:K2,407,000 K2,393,200
This item: LG 75” UN80 Series UHD 4K Smart TV 75UN8000PTB (Black) K2,350,000